अल्जेरिया: विमान दुर्घटना, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु, उद्धार
एजेन्सी- अल्जेरियामा सैनिक विमान दुर्घटनामा परेको छ। सो दुर्घटनामा १ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या करिब २ सयसम्म पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। विमान अल्जेरियाको बौफारिकस्थित सैनिक हवाई मैदानमा बुधबार
पाकिस्तानद्वारा नेपाललाई दिइएको छात्रवृत्ति दोब्बर
काठमाडौँ, रासस । पाकिस्तान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति ‘सिट’ दोब्बरले वृद्धि गरिएको घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पन्न आफ्नो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको उक्त घोषणाबमोजिम
एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै डोनाल्ड ट्रम्प !
वाशिङ्टन डिसी । अमेरिकी गुप्तचार संस्था एफबीआईले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वकिलको कार्यालयमा छापा मारेको छ । अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनका अनुसार, एफबीआईले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीजि वकिल मिसेल कोहेनको कार्यालयमा छापा
आरक्षणको बिरोधमा भारत बन्दको घोषणा !
काठमाडौं । आरक्षणको बिरोधमा आज भारत बन्दको घोषणा गरिएको छ । एक हप्ता देखि भारतमा आन्दोलन जारी छ । आठ दिन पहिले दलित संगठनहरुले भारत आव्हन गरेका थिए । आज
मोदी भ्रमणको विरोधमा माओवादीद्वारा श्रृंखलाबद्ध विष्फोट, दुई सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतमा माओवादी विद्रोहीहरूले मंगलबार बिहानै गरेको शृंखलावद्ध विस्फोटमा भारतीय अर्धसैनिक बल डिआरजीका दुई जवानको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन् । विद्रोहीहरूले १४ अप्रिलमा
ट्रम्पका वकिलको कार्यालयमा छापा, महत्वपूर्ण कागजात जफत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना वकिलको व्यक्तिगत कार्यालयमा संघीय जाँच आयोग (एफबिआई) ले गरेको छापाको आलोचना गरेका छन् । सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा रुसी दखलका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको एफबिआईले
एजेन्सी। स्कुल बस दुर्घटना हुँदा ३० बालबालिकाको ज्यान गएको छ । गुरचाल गाउँको बजीर राम सिंह पठानिया ममोरियल पब्लिक स्कुलको बस दिउँसो ३ बजे स्कुल बिदा भएपछि विद्यार्थीलाई घरमा छोड्न
ग्यास आक्रमणमा परी कम्तिमा ७० जनाको मृत्यु
गुटा– सिरियाको पूर्वी गुटास्थित डोमामा भएको रासायनिक ग्यास आक्रमणमा परी कम्तिमा ७० जनाको मृत्यु भएको छ। उद्धारकर्ता तथा चिकित्सकको टोलीले घटनास्थलमा घाइतेको संख्या धेरै भएकोले मृतकको संख्या बढ्नसक्ने अनुमान गरेका
सी जिनपिङले किमलाई दिए ४ लाख डलरको उपहार ?
एजेन्सी । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र पत्नी री सोल्जुलाई चीन भ्रमणबाट महङ्को उपहारका साथ बिदा गरिएको खबर सार्वजानिक भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिङपिङले किमलाई पहिलोपटकको
जोधपुर । कालो हिरण मारेको मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएका बलिउड अभिनेता सलमान खान दुई दिनमा जमानतमा रिहा भएको छन् । अदालतले पाँच वर्ष कैद फैसला गरेपछि उनका कानून
स्टार इन्डियाद्वारा ९८ अर्बमा भारतीय क्रिकेटको प्रशारण अधिकार खरिद
स्टार इन्डियाले भारतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय टिभी र डिजिटल प्रशारणको अधिकार पाएको छ। स्टार इन्डियाले बिसिसिआईलाई ९४४ मिलियन अमेरिकी डलरमा सो अधिकार किनेको छ । स्टार इण्डियाले आगामी पाँच वर्षका लागि
टेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा के भयो मोदी जी ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली हाल भारत भ्रमणमा छन् र त्यसक्रममा नेपाल र भारतले सम्भवतः कैयौँ समझदारी पनि गर्नेछन्। कागजमा हुने त्यस्ता समझदारी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ। त्यसको एउटा